12 Oct 2017 . 2:21 PM
အခရာရုပ်ရုပ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ..မင်္ဂလာပါ။ သီတင်းကျွတ်ပွဲတွေ၊လမ်းတွေနဲ့ အရင်တစ်ပတ်က ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဒီတစ်ပတ်တော့ အတိုးချကြည့်စရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရှိတယ်ဗျာ။ ဘယ်ကားတွေ ရှိသလဲဆိုတာတော့ ဒီမှာ တစ်ချက်ကြည့်!
၁။ ပရိုဂျူဆာ မကြီးစိုး
ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို သဘာဝကျကျရယ်ရအောင် ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး တဝါးဝါးရယ်ရပြီး ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်သွားစေမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလို့ ဆိုထားတဲ့ “ပရိုဂျုဆာ မကြီးစိုး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟက ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခန့်စည်သူ၊ နေဒွေး၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ၊ဒိန်းဒေါင်၊ကျော်ထူး၊5Star အဖွဲ့တွေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားကို ပြသနေတဲ့ ရုံတွေကတော့
ရှေ့ဆောင်၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး) ၊ ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း၊စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
10:00 AM ၊ 12:30PM၊ 3:30PM ၊ 6:30PM ၊ 9:30PM
JCGV Junction City ပွဲချိန်
9:40AM,12:00PM,2:25PM,4:50PM,7:15PM,9:40PM (Fri to Sun)
9:40AM,12:00PM,2:25PM,4:50PM,7:15PM (Mon to Thu)
JCGV City Mall (St.John) ပွဲချိန်
9:45AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM,9:00PM (Fri to Sun)
9:45AM,12:30PM, 3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
JCGV Junction Maw Tin ပွဲချိန်
10:00AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM,9:15PM (Fri to Sat)
10:00AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊ မြရတနာ)၊ (တာမွေ၊ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ကန်သာယာ)ပွဲချိန်
10:00AM ၊ 12:30PM၊ 3:30PM ၊ 6:30PM ၊ 9:30PM
JCGV Mingalar Mandalay ပွဲချိန်
10:00AM, 12:15PM , 2:35PM, 5:00PM, 7:15PM, 9:30PM(Fri to Sun)
10:00AM, 12:15PM , 2:35PM, 5:00PM, 7:30PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ၊မြို့ဂုဏ်ရောင်) ပွဲချိန်
***ပရိုဂျူဆာ မကြီးစိုး*** ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး=================================၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ရက်မှစတင်၍ Mingalar Cinemasအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြပြီ…မကြီးစိုး..ကတော့ ပရိတ်တွေဆီအရောက်လာတော့မယ်နော်…..ပါဝါကင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဒါရိုက်တာ – ပြည်ဟိန်းသီဟ ရိုက်ကူးပြီးသရုပ်ဆောင် – စိုးမြတ်သူဇာ၊ခန့်စည်သူ၊နေဒွေး၊သင်ဇာဝင့်ကျော်၊တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ၊ ဒိန်းဒေါင်၊ ဆင်မ၊ ကျော်ထူး၊5Star အဖွဲ့ ၊ဟားသသိုက်အဖွဲ့ နှင့် အနုပညာရှင်များစွာပါဝင်ထားပါတယ်…ရုပ်ရှင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုသဘာဝကျကျရယ်ရအောင်ရိုက်ကူးထားပြီးပရိတ်သတ် တွေဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး တစ်ဝါးဝါးရယ်ရပြီး ဘ၀အမောတွေပြေပျောက်သွားစေမဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပြသပေးမဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံများကတော့..ရှေ့ဆောင် – ၂၅၂၁၁၃၊ ၃၈၈၀၃၄၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၀၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၁မင်္ဂလာစံပြ – ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၅ ၊ ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၆ ၊ ၀၁၂၃၀၃၁၆၅မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး) – ၂၄၃၀၅၇ ၊ ၂၄၃၀၅၈ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) – ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂မြို့မ – ၃၉၁၃၆ ၊ ၃၉၁၃၇ပြည် – မင်္ဂလာထွန်းသီရိ – ၀၉၇၉၁၁၈၃၇၅၁ ၊ ၀၉၇၉၁၁၈၃၇၅၂ပဲခူး – Mingalar Cineplex Icon Shopping Mall – ၀၉ ၄၅၆၆၀၀၁၁၅ ၊ ၀၉ ၄၅၆၆၀၀၁၁၆တောင်ငူ – New 3D Cinema – ၀၉ ၈၆၆၆၄၅၅ ၊ ၀၉ ၇၇၅၃၅၈၉၉၁ ၊ ၀၉ ၇၇၅၃၅၈၉၉၂မင်္ဂလာစံပြ (မကွေး) – ၀၉ ၇၆၈၅၂၅၇၄၁ ၊ ၀၉ ၇၆၈၅၂၅၇၄၂ ၊ ၀၉ ၇၆၈၅၂၅၇၄၃လားရှိုး – အောင်သီရိ – ၀၉၂၀၁၇၄၅၀တောင်ကြီး – မြသုခ – ၀၉ ၇၆၉၀၄၈၉၁၂ – ၀၉ ၇၆၉၀၄၈၉၁၃အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသပေးပါတော့မည်…တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Mingalar Cinemas on Monday, October 9, 2017
၂။ The Promise – 2D
ထိုင်းသရဲကားကြိုက်သူတွေအတွက် “The Promise” လာပါပြီ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ အတူတူ သေကြောင်းကြံဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးကာမှ တစ်ယောက်က မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ၊ ကတိပျက်ခဲ့အပြီးမှာတော့ အဲ့ဒီနေရာကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သွားအပြီးမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်ကြည့်ရမှာပါ။
နေပြည်တော်၊ ဂမုန်းပွင့်(လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
၃။ Net I Die – 2D
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ထိုင်းသရဲကားရက်သတ္တပတ်လို့ ခေါ်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ Net I Die ကတော့ Cosmetics ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ ပါတဲ့ Net Idol ကောင်မလေးတွေ ဘာဖြစ်လို့ သေဆုံးသွားကြသလဲ။Post တစ်ခုမှာ Tagged အလုပ်ခံရရုံနဲ့ ဘာလို့ သေဆုံးသွားကြတာလဲဆိုတာ ထိုင်းသရဲကားထုံးစံအတိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းခပ်ရမ်းရမ်းခြောက်လှန့်ခံရမှာပါ။ဘယ်ရုံတွေမှာ တင်လဲဆိုတာတော့…
10:00AM,12:15PM,2:40PM,5:00PM,7:30PM,9:50PM (Fri to Sun)
10:00AM,12:15PM,2:40PM,5:00PM,7:30PM (Mon to Thu)
9:30AM, 12:00PM, 2:00PM, 4:30PM, 7:30PM, 9:30PM (Fri to Sun)
9:30AM, 12:00PM, 2:00PM, 4:30PM, 7:30PM (Mon to Thu)
JCGV Junction Square ပွဲချိန်
9:30AM, 11:30AM, 1:30PM, 3:30PM, 5:30PM, 7:45PM, 9:45PM (Fri to Sat)
9:30AM, 11:30AM, 1:30PM, 3:30PM, 5:30PM, 7:45PM (Sun to Thu)
11:45AM , 4:15PM, 8:45PM (Fri to Sun)
11:45AM , 4:15PM, 9:00PM (Mon to Thu)
၃။ အောင်စေ ပိုင်စေ
အောင်စေ ပိုင်စေ ဟာသအက်ရှင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း(အတွေးပုံရိပ်) က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး လူမင်း၊နေတိုး၊ မင်းရာဇာ၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ အိချောပို၊ ယွန်းရွှေရည်တို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။ မြန်မာကားများထုံးစံအတိုင်း ဘယ်လိုအလွဲတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုရယ်ရမယ်၊ အသိပညာပေးတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလည်း ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ ဘာတွေ ပါတယ်ဆိုတာ အောက်ကရုံတွေမှာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်-စံရိပ်ငြိမ်)၊ သမ္မတ၊သွင်၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာဝဇီရာ၊ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ ပွဲချိန်
9:50AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM,9:10PM(Fri to Sun)
9:50AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM (Mon to Thu)
9:45AM, 12:45PM, 3:15PM, 6:00PM, 9:00PM (Fri to Sat)
9:45AM, 12:45PM, 3:15PM, 6:00PM (Sun to Thu)
10:30AM,1:00PM,3:45PM,6:45PM,9:30PM (Fri to Sat)
10:30AM,1:00PM,3:45PM,6:45PM (Sun to Thu)
ဝင်းလိုက်၊ မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း ပွဲချိန်
9:30AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM, 9:00PM (Fri to Sun)
9:30AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
***** အောင်စေ ပိုင်စေ **** ဟာသ အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတစ်နိုင်ငံလုံးရှိအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ၆-၁၀-၂၀၁၇ (သောကြာ)နေ့မှစတင်၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဆင်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ရုံတင်ပြသပါမည်။ရန်ကုန် *** သမ္မတ ၊ သွင် ၊ မင်္ဂလာ (သိမ်ကြီးဈေး) ၊ မင်္ဂလာစံပြ (ဘုန်းကြီးလမ်း) ၊ ဂမုန်းပွင့်(စံရိပ်ငြိမ်) ၊Top Royal (ပါရမီ စိန်ဂေဟာ)JCGV (Maw Tin)JCGV (Square) JCGV (Junction City)JCGV ( စိန်ဂျွန်း)Red Radiance မြဟံသာ ( သန်လျင် )Red Radiance (လှည်းတန်းစင်တာ)ရွှေပြည်သာ***3D Cinema မန္တလေး *** ၀င်းလိုက်၊ မြို့မ ၊JCGV , မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း)၊ နေပြည်တော် *** JCGV၊ အောင်သပြေ၊ ဇေယျာသီရိပြည် *** မင်္ဂလာထွန်းသီရိပဲခူး *** Icon (Mingalar Cinema )တောင်ငူ*** 3Dမကွေး *** မင်္ဂလာ စံပြမော်လမြိုင် *** JCGVParadiso *** မှော်ဘီParadiso *** မုံရွာParadiso *** ဖျာပုံParadiso *** ရွှေဘိုParadiso *** ကျောက်ပန်းတောင်းParadiso*** ဘိုကလေးParadiso*** အောင်ပန်းParadiso*** သထုံဘားအံ *** တက်နေ၀င်း၊ ဦးဆောက်ပန်း၊ပုသိမ် *** ရွှေပြည်တော်မြ၀တီ *** သွန်းရွှေစင်တောင်ကြီး *** မြသုခ၊ Mega Aceလားရှိုး *** သီတာအေး၊ သိန်းထိုက်၊ အောင်သီရိမြစ်ကြီးနား *** ဧရာပြင်ဦးလွင် *** ချယ်ရီလွင်၊ Movie Planetဗန်းမော် *** စတားရေနံချောင်း *** ရတနာပခုက္ကူ *** သီဟမိတ္ထီလာ *** Grandမြင်းခြံ***မြေလတ်ဂုဏ်ထားဝယ်***အောင်မင်္ဂလာမြိတ် *** မြိတ်မင်္ဂလာ တို့တွင် တစ်ပြိုင်တည်းပြသပါမည်။ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များလာရောက်ကြည့်ရှု့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
Posted by အောင်စေ ပိုင်စေ on Saturday, September 16, 2017
မြင့်မြတ် (ဂျင်းကောင်)ရဲ့ နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ အသံတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလို့ ဆိုထားတဲ့ “ဇွတ်ကျား” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အာရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ အကယ်ဒမီ ကျော်ရဲအောင်၊ မြင့်မြတ်၊ မိုးအောင်ရင်၊ ရဲလေး၊ ထက်အောင်ရှိုင်း၊ အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာ၊ အကယ်ဒမီခိုင်သင်းကြည်၊ မေ၊ ရတနာဗိုနဲ့ တခြားဟာသသရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီကားကို ဘယ်ရုံတွေမှာ ပြသမလဲဆိုတာတော့…
ရှေ့ဆောင်၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ ၂၊ ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
10:00AM,12:50PM,2:05PM,3:50PM,6:50PM,9:30PM (Fri to Sun)
10:00AM,12:50PM,2:05PM,3:50PM,6:50PM (Mon to Thu)
10:00AM, 1:00PM, 3:45PM,6:30PM,9:30PM (Fri to Sat)
10:00AM, 1:00PM, 3:45PM,6:30PM (Sun to Thu)
10:15AM, 1:00PM, 4:00PM,7:00PM, 9:45PM (Fri to Sun)
10:15AM, 1:00PM, 4:00PM,7:00PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊မြရတနာ)၊(တာမွေ၊ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
10:00AM၊ 12:40PM၊ 3:40PM၊ 6:40PM၊ 9:00PM
9:15AM, 1:45PM, 6:15PM (Fri to Thu)
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ၊ မြို့ဂုဏ်ရောင်)ပွဲချိန်
ကဲ့ ချစ်ပရိသတ်တို့ရေ….အပျော်ဇာတ်ကားတွေ မလာလို့ပျင်းရိတော်မူနေကြပြီးလားပျော်တော်ဆက်ဖို့ ဘုန်းကညာနှစ်ပါးအဆက် မဟုတ်တဲ့ဇွတ်ကျား ကတော့…..ရုံထဲက ပရိသတ်တွေ တဝုန်းဝုန်းဟားစေဖို့မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ဒုန်းစိုင်းကာ လာတော့မှာမို့နမူနာလေး ရှုစားရင်း သရုပ်ဆောင် fans တို့ရဲ့Likes ….Share များနဲ့ဝုန်းဒိုင်းကြဲ အားပေးတော်မူကြပါခင်ဗျား….
Posted by ဇွတ်ကျား -ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား on Sunday, September 10, 2017
၅။ American Made – 2D
ဒီကားဟာ မင်းသားကြီး Tom Cruise ပါဝင်တဲ့ အတ္ထုပတ္တိနွယ်မူခင်းဇာတ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Doug Liman က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Tom Cruise အပြင် Domhnall Gleeson ၊ Sarah Wright တို့လည်း ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Barry Seal လို့ ခေါ်တဲ့ Pilot ဟောင်းတစ်ယောက်ဟာ Medellin Cartel ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးအုပ်စုတစ်ခုရဲ့ မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ကျဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ Seal ဟာ အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကို ပြောင်းပြီး ဘယ်လို လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားဟာ အကောင်းမြင်ဝေဖန်မှုတွေရပြီး အထူးသဖြင့် Tom Cruise ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို ချီးကျူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.3 ရပြီး Rotten Tomatoes မှာ 87% ရထားတဲ့အတွက် Mission:Impossible ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Tom Cruise ရဲ့ နောက်ထပ်အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
၆။ Renegades – 2D
ဒီကားကတော့ စစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Steven Quale က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီကားမှာ Sullivan Stapleton ၊ J.K Simmons နဲ့ Charlie Bewley တို့ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ ပြင်သစ်မှာ ပြသမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ တန်းတူ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IMDB Rating 5.7 ရထားပြီး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက Navy SEALs အဖွဲ့ငယ်တစ်ဖွဲ့ဟာ ဘော်စနီးယန်းရေကန်မှာ ရအောက်ရတနာသိုက်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်ရမှာပါ။
၇။ Kingsman : The Golden Circle – 2D
Kingsman ဟာ အက်ရှင်နဲ့ဟာသ ရောထားတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Matthew Vaughn က ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Kingsman ဆိုတဲ့ ကောမစ်စီးရီးကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ြပီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Kingsman : The Secret Service ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားဟာ ပေ့ါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်စရာ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် နာမည်ကြီး မင်းသား၊မင်းသမီးတွေအများကြီး ပါဝင်ထားပြီး Colin Firth ၊ Taron Egerton ၊ Mark Strong ၊ Edward Holcroft ၊ Sophie Cookson တို့ အပြင် Julianne Moore ၊ Halle Berry ၊ Pedro Pascal ၊ Elton John ၊ Channing Tatum၊ Jeff Bridges တို့လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
ဒီကားအတွက် အဆိုးရော၊ အကောင်းရောဝေဖန်မှုတွေ ရရှိထားပြီး IMDB Rating 7.3 ၊ Rotten Tomatoes မှာ 50% ရရှိထားတဲ့အတွက် စိတ်အပန်းပြေ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ့်သူတွေအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
၈။ The Foreigner
The Foreigner ဟာ အက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကားကို Stephan Leather ရဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဝတ္ထု The Chinaman ကို အခြေခံပြီးတော့ ဒါရိုက်တာ Martin Campbell က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Jackie Chan တင်မဟုတ်ဘဲ မင်းသားကြီး Pierce Brosnan ၊ Charlie Murphy ၊ Michael McElhatton ၊ Orla Brady ၊ Liu Tao နဲ့ Katie Leung တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီကားဟာ လူကြည့်များလို့ ဒီမှာလည်း ရုံမဆင်းသေးဘဲ ဆက်လက်ပြသနေရတယ့် ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားဟာ ဂျက်ကီချန်းရိုက်နေကြဇာတ်ကားတွေနဲ့ မတူဘဲ နိုင်ငံရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ထွေးရောယှက်တင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Trailer မှာတင် အတော်စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် သွားကြည့်သင့်တဲ့ ကားလို့ အခရာက ညွှန်းပါရစေ။
9:30AM,11:45AM,4:40PM,7:00PM,9:20PM(Fri to Sun)
9:30AM,11:45AM,4:40PM,7:00PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကန်သာယာ) ပွဲချိန်
10:15AM၊ 12:45PM၊ 3:45PM၊ 6:45PM၊ 9:15PM
Mega Ace မြရတနာ – ဖုန်း – ၀၁ – ၅၅၆ ၇၈၂။
သီတင်းကျွတ်လာကန်တော့မယ့် ကောင်မလေးတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း
by yoelu . 1 day ago
နေခြည်ဦးရဲ့  အဝတ်အစားလဲခန်း ကို တစ်ခေါက်လောက် အလည်သွားကြရအောင်
လူငယ်ဆန်ဆန်ပေါ့ပါးသွက်လက်နေတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်ရဲ့ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ
ဂန္ထဝင်မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၅) ကား
by Kyaw Soe Aung . 1 day ago
သားဖြစ်သူရဲ့  Movie Show အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ မေသန်းနု
ပေါလ်စခိုး Paul Scholes ရဲ့ ကစားဟန်တွေကို လေ့လာနေရတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကိုဗာချစ် Kovacic
ဒီရာသီမှာ ဘန်လေ ရလဒ်ဆိုးနေတာက အင်္ကျီစပွန်ဆာ နာမည်ကြောင့်များလား
အသင်းကြီးတွေ နိုင်ပွဲရဖို့ အခက်အခဲမရှိနိုင်တဲ့ စနေနေ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ
Android 9.0 Pie Stable Update ရရှိပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 6
ကိုယ့်အိမ်က မိန်းကလေးတွေကို ကာကွယ်ကြရအောင်လား